Waxqabadka Cristiano Ronaldo oo ay maanta ku beegan tahay markii uu dunida ku soo biiray – Gool FM
Waxqabadka Cristiano Ronaldo oo ay maanta ku beegan tahay markii uu dunida ku soo biiray
(Turin) 05 Feb 2020. Kabtanka xulka qaranka Portugal iyo dhaliyaha ugu halista badan kooxda Juventus iyo guud ahaan kubadda cagta caalamka waqti xaadirkaan ee Cristiano Ronaldo ayay maanta ku beegan tahay dhalashadiisa.
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ayaa dunida ku soo biiray maanta oo kale 05 February sanadkii 1985-kii, waxa uu ku dhashay halka loo yaqaano Funchal oo dhacda Madeira ee Cariga Portugal, waxa uuna maanta kaamilay sanadkiisii 35-aad ee cimrigiisa.
Cristiano Ronaldo ayaa tan iyo bilawgiisii xirfaddiisa kubadda cagta saftay ku dhawaad kun kulan kaddib markii uu ciyaaray 994 kulan.
Weeraryahan Ronaldo ayaa xirfaddiisa ciyaareed dhaliyay 722 gool waxaana uu caawiyay 251 gool oo kale, isagoo ku guuleystay koobab gaaraya 29 koob.
Ninka reer Portugal ayaa ka mid ah xiddigaha ugu sarreeya taariikhda kubadda cagta kaddib markii uu shan goor ku guuleystay abaal-marinta xiddiga ugu wanaagsan adduunka ee Ballon d’Or.
CR7 waa gooldhaliyaha ugu sarreeya kooxda wayn ee Real Madrid, sidoo kale waa ciyaaryahanka ugu safashada badan iyo Gooldhaliyaha ugu sarreeya xulkiisa qaranka Portugal.
Halyeygan ayaa kubadda cagta heerka sare ka soo bilaabay 2002–2003 Naadiga Sporting CP, waxa uuna ku biiray Kooxda Manchester United intii u dhexaysay 2003–2009, waxa uu mar qura badalay kooxdiisa isagoo ku biiray kooxda Real Madrid oo uu kula guuleystay koob walba xilli uu ka tirsanaa intii u dhexaysay sanadihii 2009–2018, Juventus ayuu ka mid noqday sanadkii 2018-kii.
Kabtanka xulka qaranka Portugal iyo dhaliyaha ugu halista badan kooxda Juventus iyo guud ahaan kubadda cagta caalamka waqti xaadirkaan ee Cristiano Ronaldo ayay maanta ku beegan tahay dhalashadiisa waana uu 35-sano jirsaday.
Inter Milan iyo Bayern Munich oo wada doonaya xiddig ay Kooxda Manchester City diyaar u tahay inuu tago